Uyilo olwenziwe-uHengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Imodyuli yokubonisa ye-LCD, i-LCM, i-TFT, i-OLED yesiqhelo
I-LCD / LCM / TFT / i-OLED isiko / iSemi-isiko
Ngaphandle kokuboniswa kwemveliso esemgangathweni yeLCD / TFT / OLED, iHengTai ibonelela ngemiboniso eyenziweyo. Iphothifoliyo ebanzi yenza ukuba kube nakho ukwenza izisombululo ezenziwe ngabathengi ukuze zilungele usetyenziso lwazo. Sinobuchwephesha bokubonisa obuphambili obufumanekayo ukuba busetyenziswe kuyilo lwakho kwaye ukuba kukho nantoni na ofuna ukuyitshintsha malunga nenye yeemboniso zethu zeLCD / TFT / OLED, singenza ukuba yenzeke. Ngamava angaphezulu kweminyaka engama-21, ukuthengisa kunye neqela lethu lobunjineli liya kuba nawe kuyo yonke inkqubo yophuhliso kwaye liya kuqinisekisa ulwenziwo olusemgangathweni okanye ulwenziwo olupheleleyo olwenzelwe isicelo ngasinye.
Izisombululo zethu zoyilo ngokwesiko zeLCD / TFT / OLED ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo ngokweemfuno zabathengi. I-HengTai inokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo kuhlobo lwasemva, ipini kunye nesinxibelelanisi, intambo, isikrini sokuchukumisa (RTP) kunye ne-capacitive (PCAP) yokuthinta isikrini okanye i-anti-reflective okanye i-anti-glare coating, okanye i-lens yesiko, iZIF PPC okanye ibhodi yePCB eyenziwe ngokwezifiso. okanye isisombululo esigqibeleleyo sesicelo sakho semveliso, kunye neSisombululo esiHlangeneyo seNkqubo.
Ngaba ufuna uncedo kuyilo lwemveliso okanye isisombululo? Nxibelelana nathi usebenzisa le fomu:
Intambo, ipini kunye nesinxibelelanisi
I-OLED / i-LCM / i-LCD yesiko elipheleleyo
Ifom yophando ye-OLED
Ifom yoPhando lwe-LCM
Ifom yoPhando lweLCD
Uyilo olwenziwe ngokwezifiso, umboniso wesiko, ukubonisa okwenziwe nge-oled, isiko elenzelwe i-lcd, i-lcd yeglasi yesiko, umbala wesiko we-lcd, ubungakanani bokujonga esiko, ukwenza ngokwezifiso i-lcd zamkelekile.
Enye iNkonzo yoku-odola
Inkampani yethu inokunceda abathengi kuyo yonke intsebenziswano yorhwebo eTshayina, Zonke izinto kunye neenkonzo abathengi ekufuneka bezithengile okanye bazenze (ezinje ngeetshiphusi, izixhasi, izixhumi, izihlanganisi, iigobolondo, i-SMT, iingcingo zokudibanisa, iziseko, njl.), Abathengi banako Chonga ababoneleli ukuba bathumele izixhobo kuthi, Kwaye emva koko umanyano uthunyelwe kuwe yinkampani yethu, Oku kunokuphucula ukusebenza kakuhle kwaye kugcine ixesha elininzi kunye neendleko zokuhamba